Global Voices teny Malagasy » Taiwan: Fanadihadiana Manokan’Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Manohitra ny Nokleary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Marsa 2011 11:43 GMT 1	 · Mpanoratra I-fan Lin Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Taiwan (ROC), Fanoherana, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Toby mpamokatra angovo nokleary faha-efatra  no an-dalam-panorenana izao any Taiwan, ao amin'ny tanànan'i Gongliao, 40 km monja miala ny tanànan'i Taipei .
Tamin'ny 1988, valo taona taorian'ny nanapahan'ny Taiwan Power Company hevitra voalohany hanangana ny toby mpamokatra angovo nokleary faha-efatra, nanao fihaonana momba ny niafaran'ny fikambanan-dry zareo manohitra ny nokleary ireo mponina ao Gongliao. Tamin'ny 1994, ireo mponina ao Gongliao dia nanao ny fitsapan-kevibahoaka izay azy ireo manokana  ka nahitàna fa 96% amin'ireo mponina ao an-toerana no manohitra ny fananganana ilay toby famokarana angovo nokleary.
Tamin'ny 1991  [zh], taorian'ny fanorenan-javatra nataon'ireo mpanohitra teo amin'ilay toerana nomanina hisy ilay toby mpamokatra angovo nokleary, dia nanandrana namotika ireo talantàlana natao ho fanoherana ny polisy.
Tamin'ny 1999, taorian'ny nankatoavan'ny Filankevitry ny Angovo Ataomika ny fahazoana alàlana hanangana ilay foibe famokarana angovo nokleary faha efatra, tsy nisy filazàna mialoha fa tonga dia nosintonin'ny governemanta daholo ny fahazoan-dàlana manjono  ho an'ireo mponina tao Gongliao. Nolavin'ny mponina ny onitra natolotry ny  [zh] governemanta sady nandeha nanao hetsi-panoherana io fanapahan-kevitra io tany amin'ny Antenimiera mpanatanteraka tao Yuan  ry zareo.
Tamin'ny 2000, ireo mafàna fo mpanohitra ny nokleary ireo dia nanangana ireny korisarisa filalaovana ireny taorian'ny nandraisan'ny kandidà avy amin'ny Antoko Demaokratika Liam-pivoarana ny toerany. Nanapa-kevitra ny hampiato ny asa fanorenana ilay foibe faha efatra famokarana hery nokleary ny antoko teo amin'ny fitondrana. Na izany aza, satria ny disadisa politika  [zh] teo amin'ny antoko teo amin'ny fitondrana sy ny antoko mpanohitra mbola tsy nilamina velively, ilay ‘fanafoanana’ koa dia nofoanana indray tamin'ny 2001.
Taorian'ny 20 taona mahery nanaovana hetsika hanoherana ilay foibe famokarana angovo nokleary, nitohy indray ny asa fanorenana, namela ireo mponina ao an-toerana hiatrika samirery ny ahiahiny tsy misy fanantenana  [zh].
Ilay lahiantitra mitorevaka manoloana ny tempoly ao Aodi sady mitazana ny firoson'ny tanora vitsivitsy (avy amin'i NONUKE ). Nisento izy, ‘mazava loatra fa matahotra aho hoe ho tena akaiky dia akaikin'ny tranoko no hisy ilay foibe nokleary.’ Na izany aza, efa an-dalam-pahavitàna ilay foibe. Inona moa no azonao atao manoloana ny governemanta?
Ao Japana, misy ihany koa ireo fihetsiketsehana mandeha amin'ny anaran'ny tenany manokana manohitra ilay foibe famokarana angovo nokleary ao. Ireo mponina (latsaky ny 500) ao Iwaishima (祝島)  [zh] dia nanohitra foana ny fametrahana foibe nokleary tao an-toerana nandritra ny 28 taona mahery.
Taorian'ilay horohorontany faran'izay goavana indrindra teo amin'ny tantaran'i Japana  nitranga tamin'ity volana ity, nisy ny ahiahy  momba ny solika nampiasaina tao amin'ny vondrom-pihary faha-3 tao amin'ny foibe famokarana angovo nokleary tao Fukushima I :
Na izany aza, tsy dia maro ny olona mahalala fa enina volana lasa izay dia nisy vondron'olona tsy nandry saina natsangan'ireo zokiolona Japone (福島老朽原発を考える会) ho an'ny foibe famokarana angovo nokleary tao Fukushima I  [jp] ary namakivaky làlana ho any Tokya hanohitra ny Tokyo Electricity Power Company (orinasa mpamokatra herinaratra ao Tokyo) sy ny fampiasàna ny loharanon'angovo MOX .
Roodo, mpitoraka bilaogy Summerlake, taorian'ny nahitàny ireo sary [zh] avy amin'ireo hetsika nataon-dry zareo tany Tokyo, dia niteny hoe:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/29/15691/
 Toby mpamokatra angovo nokleary faha-efatra: http://en.wikipedia.org/wiki/Longmen_Nuclear_Power_Plant
 nanao ny fitsapan-kevibahoaka izay azy ireo manokana: http://www.taiwangoodlife.org/story/20100909/2559
 nosintonin'ny governemanta daholo ny fahazoan-dàlana manjono: http://ago.gcaa.org.tw/issue/nuclear/news/NUKE4-01.htm
 Antenimiera mpanatanteraka tao Yuan: http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Yuan
 horohorontany faran'izay goavana indrindra teo amin'ny tantaran'i Japana: https://globalvoicesonline.org/2011/03/11/largest-earthquake-in-recorded-history-in-japan/
 nisy ny ahiahy: http://sentvolks.blogspot.com/2011/03/mox-plutonium-fuel-used-in-fukushimas.html
 foibe famokarana angovo nokleary tao Fukushima I: https://globalvoicesonline.org/2011/03/12/japan-fear-in-fukushima/
 a nisy vondron'olona tsy nandry saina natsangan'ireo zokiolona Japone (福島老朽原発を考える会) ho an'ny foibe famokarana angovo nokleary tao Fukushima I: http://fukurou.txt-nifty.com/fukurou/2010/09/post-d51a.html
 loharanon'angovo MOX: http://en.wikipedia.org/wiki/MOX_fuel
 ireo sary: http://blog.roodo.com/SummerLake/archives/15372871.html